भुकम्प पिडित भोकै,सहयोग आएको अन्न कुहाएर फ्याकीदै-अन्नको श्राप कसलाई लाग्ला? ~ Khabardari.com
भुकम्प पिडित भोकै,सहयोग आएको अन्न कुहाएर फ्याकीदै-अन्नको श्राप कसलाई लाग्ला?
सिन्धुपाल्चोक / विनाशकारी भूकम्पको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि दूरदराजका भूकम्पपीडितहरुमा पेटभरी खाने सपना नै छ अझै । भूकप्पपछि पेटभरी खान नपाएका र अनिदो रात कटाउनेहरु पनि जिल्लामा धेरै छन् ।
भूकम्पपछि पीडितलाई राहतका लागि जिल्लामा आएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले मंगलबार डेढ सय टन खाद्य सामाग्री खाल्डोमा पुरेको छ ।
पीडितलाई वितरण गर्न ल्याएको १ सय ६० टन चामल र दाल मेलचौस्थित गोदाममै कुहिएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाल्डोमा पुरेर नष्ट गरेको हो ।अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।